कसरी कलाकार डेविड ब्रिडबर्गले मूल काम सिर्जना गर्दछ
तपाईंको कलाकार इनोभेटर डेभिड ब्रिडबर्ग
मेरो विश्वास, कला बोल्ने शब्द भन्दा फराकिलो भाषा हो। कलात्मक अवधारणालाई अर्थ दिनु भनेको एक मनोरन्जन र संज्ञानात्मक व्यायाम हो जुन हामी प्रत्येकलाई धेरै मानव बनाउँछ।
संक्षेपमा भन्नुपर्दा, उत्तर आधुनिकता विगत र वर्तमानको संश्लेषण हो। मेरो कल्पना दुबै दृश्य र अवधारणात्मक हो।
मेरो विचार मुद्रण प्रक्रिया को लागी जनता संग साझा को मेरो तरीका हो।
दृश्य कलामा संलग्न व्यक्तिहरू कलाकृतिको एक रमाईलो शरीर फेला पार्न एक मिसनमा छन्। आशा छ, म तपाइँको भूख मिल्छ।
मेरो प्रत्येक छविहरू अमेरिकी प्रतिलिपि अधिकार कार्यालयमा दर्ता गरिएको छ। मेरो काम सार्वजनिक डोमेनमा छैन।
थप व्यक्तिगत प्राप्त गर्दै
एक कलाकार को विकास
मलाई घोषणा गर्नुहोस्, मसँग श्रवण प्रक्रिया समस्या, एक जन्म दोष। म २ 28 बर्षको उमेर सम्म यो अवरोधको निदान गरिएको थिएन।
सन्‌ १ 1981 20१ मा मैले ह्युस्टन विश्वविद्यालयमा ईन्जिनियरि study पढ्नको लागि ब्लूमफील्ड हाई स्कूल, सीटी छोडे। म घरेलु थिएँ, र अध्ययन गर्न गाह्रो थियो। २० वर्षको उमेरमा घर आउँदा, मैले युकॉनमार्फत काम गर्न सुरु गरें।
दुर्घटनाबाट कलामा झर्दै, मैले मेरो मुख्य ऐच्छिक पूरा गर्न भिजुअल आर्ट क्लासहरूमा भर्ना गरें, र एक विद्यार्थी बन्यो। पूर्वव्यापी, कला शिक्षा म प्राप्त रमाईलो थियो उत्कृष्ट थियो।
कलेज पछि, म एक व्यवसायी बन्न चाहन्थें। कलात्मक विचारहरू जहिले पनि प्रस्तुत हुन्छ, म प्रतीकात्मक वा अमूर्त छविहरू बनाउन चाहन्न। अन्य लाइनहरूमा केहि चीज सिर्जना गर्नु मेरो कल थियो।
२०० 2006 मा, मैले एउटा पुरानो चित्रमा फिगर लिने र कम्प्युटर प्रयोग गरेर अर्को चित्रमा राख्ने विचार आएको थियो। यदि मैले त्यसो गर्ने निर्णय गरेको भए, कथा समाप्त हुने थियो।
२०१२ मा, मेरो आफ्नै अध्ययन गर्दै, मैले आफैलाई फोटोशप सिकाएँ। २०१ By सम्म, म उत्पादनमा जानको लागि विचारहरू जम्मा गर्दै थिएँ। डिजिटली रूपमा कार्य गर्दा मलाई म्याक्रो र माइक्रो स्तरमा अमूर्त गर्न नयाँ तरिकाहरू प्रस्ताव गर्‍यो।
मेरो कला उत्तर आधुनिकता हो। पोस्ट आधुनिक कला को पहिलो axiom कला मा सबै पहिले नै गरेको छ कि छ। विरोधाभासपूर्ण रूपमा, मेरो उत्तर आधुनिकतावादी सौंदर्यशास्त्र दर्शकहरूको लागि नयाँ हो।
आज एक स्वतन्त्र प्रकाशन प्रकाशन कलाकारको रूपमा, म मेरो सूची अनलाइन प्रस्ताव गर्दैछु।
FineArtAmerica Corp, समयमै सुरक्षित ग्लोबल प्रिन्टि & र शिपिंग। मेरो ग्राहकहरु लाई एक अद्भुत शपिंग अनुभव को माध्यम बाट ल्याईदै Bridburg.com.
सबै अर्डरहरू Pixels / FineArtAmerica Corp. द्वारा उनीहरूको साथ पूरा हुन्छन् सन्तुष्टि ग्यारिटी (फिर्ता नीति)। तपाईंको अर्डर कल ग्राहक सेवा को बारे मा प्रश्नहरूको लागि (अर्डर नम्बर उद्धृत) २h घण्टा / दिन day दिन / हप्ता। संयुक्त राज्य अमेरिका ग्राहक सेवा कलका लागि: (24) 7०877--807०१। बेलायत ग्राहक सेवा कलका लागि: ०5901०-०१0800--014१।। पिक्सल कर्पोरेशन मुख्यालय सान्ता मोनिका, CA मा छ।
प्रश्न: तपाइँ एक मूल कलाकार फेला पार्न मिशनमा हुनुहुन्छ? एकदम अनौंठो कलाकृतिका लागि के बनाउँछ अन्वेषण गर्नुहोस्